यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने झुक्किएर पनि नलिनुहोस् रक्सीको नाम ! - IAUA
यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने झुक्किएर पनि नलिनुहोस् रक्सीको नाम !
ramkrishna October 2, 2020	interesting
मानिस हरु पछिल्लो समय रक्सि जन्य पदार्थको सेवन अत्यधिक गर्ने गर्दछन। सामान्य मानिस देखि लिएर भिआइपि सम्म रक्सीको कुलतमा फसेको देख्न सुन्न पाईन्छ। तर भारतमा रहेको एउटा गाउँमा रक्सी पिउनु त टाढैको कुरा रक्सीको नाम लिनु पनि पाप मान्ने गरिन्छ।
भारतको प्रतापगढ नजिकमा रहेको टाँडा गाउँमा रक्सीको नाम लिनु नै पाप मानिन्छ । उक्त गाउँको जनसंख्या लगभग २ हजार छ ।
उक्त गाउँमा वर्षौदेखि रक्सीको नाम पनि उच्चारण गरिँदैन । लबाना समुदायका मानिसहरु बस्ने त्यो गाउँमा रक्सी पिएको र बेचेको भेटिएमा कारवाही हुन्छ । पिउनु र बेच्नु त परेको कुरा त्यो गाउँमा रक्सीको शव्द उच्चारण गर्नुलाई पनि पाप ठानिन्छ ।
पञ्चायतले २० वर्ष अगाडि नै गाउँमा रक्सी पिउन तथा रक्सीका बारेमा कुराकानी गर्न पनि बन्देज लगाएको थियो।
Previous Previous post: सुन्दा रमाईलो लाग्ने र थाहा पाउन पर्ने यी ७ रोचक भनाइहरू
Next Next post: चिस्सिँदैछ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, यसरी बचाउनुहोस् प्रेम !